Hello Nepal News » रेफ्रीले महासंघलाई बुझाएको म्याच रिपोर्टमा मेस्सीबारे के लेखिएको छ ?
रेफ्रीले महासंघलाई बुझाएको म्याच रिपोर्टमा मेस्सीबारे के लेखिएको छ ?
गत आइतबार ब्राजिलमा कोपा अमेरिका फुटबलअन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिनी र चिलीबीच भएको खेलको ‘म्याच रिपोर्ट’ खेलका रेफ्रीले प्रतियोतिगा आयोजक दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ (कन्मेबल)लाई बुझाएका छन् । विवादित सो खेलमा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी र चिलीका ग्यारी मेडेलले एकसाथ खेलको ३७औं मिनेटमा रातो कार्ड पाएका थिए । दुवैजना टिमका कप्तान हुन् ।
सो खेलमा देखाइएको रातो कार्ड विवादमा तानियो भने खेलपछि अर्जेन्टिनाका मेस्सीले मिडियासँग दिएको प्रतिक्रियाले त नयाँ तरंग पैदा गरिदियो । अन्य फुटबल विश्लेषकहरूले सो खेलमा रातो कार्ड दिइनु रेफ्रीको अपरिपक्व निर्णय भनेर चर्चा गरिरहँदा सो खेलका रेफ्री डियाज डे भाइभरले भने दुवै खेलाडीले ‘गलत कार्य गरेको’, ‘विपक्षी खेलाडीमाथि आक्रमण गरेको’ र ‘रेफ्रीको अपमान गरेका’ले रातो कार्ड दिइएको निचोडसहित खेल प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा मेस्सी र मेडेलाई किन रातो कार्ड दिइयो भन्ने विषयमा बुँदागत रूपमा कारण खुलाइएको छ । मेस्सीलाई पहिला ‘विपक्षी खेलाडीसँग जुधेको’ र ‘त्यसपछि रेफ्रीको अपमान हुने गरी बोलेको’ कुरालाई मुख्य बुँदा बनाएर प्रतिवेदनमा नोट गरेका छन् । यता, मेडेलमाथि भने ‘विपक्षी खेलाडीमाथि पहिला आक्रमण गरेको’ र ‘रेफ्रीको अपमान हुने गरी विवाद गरेको’ कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
सो खेलपछि मेस्सीले कोपा आयोजक संस्था ‘भ्रष्ट संस्था रहेको’ आरोप लगाउँदै रिसाएका थिए । उनले तेस्रो स्थानको मेडल लिनसमेत अस्वीकार गरेका थिए । मेस्सीको सो आरोपलाई दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले अनुशासनबिपरीत ठानेर मेस्सीमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । उसले भोलिपल्टै विज्ञप्ति निकालेर मेस्सीको आरोपप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन र कारबाही हुनसक्ने जनाउ दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २४ असार २०७६, मंगलवार १५:४०